Love VS Sex - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အခဈြ နှငျ့ ကာမဆန်ဒ
ဆရာထူးအိမျသငျရဲ့ သီခငျြး ထဲကလို ဆနျးကွယျမှုမြားနဲ့ အရာဖွဈပွီး နှလုံးသားတို့ရဲ့အရှငျသခငျလို့ တငျစားရလောကျအောငျ ထူးခွားလှနျးတဲ့အရာပါ.. အမြိုးမြိုး အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုရပါလိမျ့မယျ… ၅၂၈ အခဈြ ၊ ၁၅၀၀ ခဈြခွငျး စသညျဖွငျ့ ကှဲပွားနစေဦေးတော့ အခဈြဆိုတာ လူသားတိုငျးကို စိုးမိုးနိုငျတာတော့ အမှနျပါပဲ…. ဆိုတော့ကာ ကနျြးမာရေး ရှုထောငျ့ကနေ ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ၁၅၀၀ အခဈြနဲ့ ကနျြးမာရေးဟာ ပိုသကျဆိုငျနတေယျလို့ မွငျပါတယျ.. အခဈြကွောငျ့ ရူးမိုကျတယျ၊ စှနျ့စားတယျ၊ အောငျမွငျတယျ ၊ ကရြှုံးတယျ ၊ ဒဏျရာအနာတရ ဖွဈကွ၊ ကနျြးမာရေးထိခိုကျသညျထိ ဖွဈကွ စသညျဖွငျ့ပေါ့… ဒါပွငျ ခဈြခွငျးကွောငျ့ လူသားနှဈဦးပေါငျးစပျကွတဲ့အခါမှာ… သဘာဝတရားအရ making sex (ကာမ) အရောကျမွောကျကွလရှေိ့ပါတယျ…
sex (ကာမဆန်ဒ) ဆိုတာ
– ‘gender’ မတူညီကွတဲ့ ဖို နဲ့ မ နှဈယောကျဟာ ပထမ နှဈသကျ စိတျဝငျစားကွတယျ၊ ဒုတိယ ခဈြကွိုကျမယျ၊ မခှဲခှာနိုငျလို့ အတူပေါငျးသငျးနထေိုငျကွတယျ… သို့သျော လူခငျြး မခှဲနိုငျလို့ ပေါငျးစပျကွပမေယျ့ စိတျခငျြးတော့ မတူကွပါဘူး..ဒီတော့ တဈယောကျက love ကို ပိုအလေးထားပွီး တဈယောကျ sex မှာ ပိုပြျောမှသှေ့ားနိုငျတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ…
ဒီတော့ကာ Love နဲ့ Sex ကွားက ကှာခွားတဲ့ တခြို့ သဘောတရားလေးတှေ ပွောပွခငျြပါတယျ…
Love ဟာ လူယောကျအပျေါ (သို့) အရာဝတ်ထု တဈခုပျေါ (သို့) မိမိစိတျထဲက ဝါသနာ ဆိုတဲ့ အရာတှပေျေါကို အရမျး စှဲလမျးတာမြိုး ၊ ရိုမနျးတဈ (romance ) ဖွဈတဲ့အရာမြိုးကို လိုခငျြတာ၊ ပေးစှမျးခငျြတာ စသညျဖွငျ့ မြိုးစုံတှေးလို့ရပါတယျ… သခြော ပွောပနိုငျလောကျအောငျထိကို မစှမျးနိုငျတဲ့ ဆနျးကွယျလှတဲ့ စိတျခံစားမှု တဈမြိုးပါ….
Sex – လူသားနှဈယောကျထိတှတေ့ယျ၊ အာရုံခံစားမှုတှမှေ့ာ ပြျောမှတေ့ယျလို့ အကွမျးဖငျြး ဆိုနိုငျပါတယျ… အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီး (သို့) အမြိုးသားနှဈဦး (သို့)အမြိုးသမီးနှဈဦး (သို့) တဈကိုယျရညျ အာသာဖွခွေငျးဖွငျ့တောငျ sex ကို ခံစားနိုငျကွပါတယျ…
ဒါပွငျ making love နဲ့ making sex ဆိုပွီး ကှဲပွားမှုရှိပါသေးတယျ…
မရငျးနှီးသူ မသိသူနှဈယောကျဟာ… ကာမဆန်ဒ တဈခုထဲကွောငျ့ sex ကိစ်စ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ … ဒါကိုmaking sex (ခဈြခွငျးမပါတဲ့ ကာမအရာမွောကျခွငျး) လို့ ဆိုကွပါတယျ…
“making love ” ဟာ ခဈြသူ လငျမယားတို့ တဈယောကျဆန်ဒကျု တဈယောကျ သိတယျ၊ သူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျတငျမက သူရဲ့ နှလုံးသား၊ စိတျခံစားမှုကို ပါ လိုကျလြောညီထှရှေိပွီး sex ကိစ်စပွီးမွောကျတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ…အခဈြပါတဲ့ ကာမ အရာမွောကျခွငျးပေါ့….
ပွောခဲ့တာတှဟော လူသားတိုငျး ယဘေုယြ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခဈြနဲ့ ကာမ(လိငျစိတျဆန်ဒ) ကွားထဲ ဖွဈတတျတဲ့ သဘောတရားတှပေါ…
အိမျထောငျမှု တဈခုတညျဆောကျတဲ့ အခါမှာတော့ love ဟာ အရေးကွီးသလို sex ဟာလဲ တဈထောငျ့တဈနရောက အရေးပါလှပါတယျ… သာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးဖွဈဖို့ရာ အစှနျးနှဈဖကျကို ဆှဲကိုငျမထားပဲ လိုကျလြောညီထှေ နထေိုငျဖို့လိုအပျပါတယျ… မိမိအိမျထောငျဖကျရဲ့ စိတျခံစားမှု ၊ ဆန်ဒ ၊ လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျဖို့ရာ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ အမှနျတကယျ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးနထေိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ…
ဒါကွောငျ့ love နဲ့. sex ကွား ဗြာမမြားပဲ သာယာလှပတဲ့ အိမျထောငျမှုကို တညျဆောကျနိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ..
အချစ်​ နှင့်​ ကာမဆန္ဒ
ဆရာထူးအိမ်​သင်​ရဲ့ သီချင်း ထဲကလို ဆန်းကြယ်​မှုများနဲ့ အရာဖြစ်​ပြီး နှလုံးသားတို့ရဲ့ အရှင်​သခင်​လို့ တင်​စားရ​လောက်​​အောင်​ ထူးခြားလွန်းတဲ့အရာပါ.. အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ်​ ဖွင့်​ဆိုရပါလိမ့်​မယ်​… ၅၂၈ အချစ်​ ၊ ၁၅၀၀ ချစ်​ခြင်း စသည်​ဖြင့်​ ကွဲပြား​နေ​စေဦး​တော့ အချစ်​ဆိုတာ လူသားတိုင်းကို စိုးမိုးနိုင်​တာ​တော့ အမှန်​ပါပဲ…. ဆို​တော့ကာ ကျန်းမာ​ရေး ရှု​ထောင့်​က​နေ ကြည့်​မယ်​ဆိုရင်​​တော့ ၁၅၀၀ အချစ်​နဲ့ ကျန်းမာ​ရေးဟာ ပိုသက်​ဆိုင်​​နေတယ်​လို့ မြင်​ပါတယ်​.. အချစ်​​ကြောင့်​ ရူးမိုက်​တယ်​၊ စွန့်​စားတယ်​၊ ​အောင်​မြင်​တယ်​ ၊ ကျရှုံးတယ်​ ၊ ဒဏ်​ရာအနာတရ ဖြစ်​ကြ၊ ကျန်းမာ​ရေးထိခိုက်​သည်​ထိ ဖြစ်​ကြ စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့… ဒါပြင်​ ချစ်​ခြင်း​ကြောင့်​ လူသားနှစ်​ဦး​ပေါင်းစပ်​ကြတဲ့အခါမှာ… သဘာဝတရားအရ making sex (ကာမ) အ​ရောက်​​မြောက်​ကြ​လေ့ရှိပါတယ်​…
sex (ကာမဆန္ဒ) ဆိုတာ
– ‘gender’ မတူညီကြတဲ့ ဖို နဲ့ မ နှစ်​​ယောက်​ဟာ ပထမ နှစ်​သက်​ စိတ်​ဝင်​စားကြတယ်​၊ ဒုတိယ ချစ်​ကြိုက်​မယ်​၊ ​မခွဲခွာနိုင်​လို့ အတူ​ပေါင်းသင်း​နေထိုင်​ကြတယ်​… သို့​သော်​ လူချင်း မခွဲနိုင်​လို့ ​ပေါင်းစပ်​ကြ​ပေမယ့်​ စိတ်​ချင်း​တော့ မတူကြပါဘူး..ဒီ​တော့ တစ်​​ယောက်​က love ကို ပိုအ​လေးထားပြီး တစ်​​ယောက်​ sex မှာ ပို​ပျော်​​မွေ့သွားနိုင်​တာမျိုး ဖြစ်နိုင်​ပါတယ်​…
ဒီ​တော့ကာ Love နဲ့ Sex ကြားက ကွာခြားတဲ့ တချို့ သ​ဘောတရား​လေး​တွေ ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
Love ဟာ လူ​ယောက်​အ​ပေါ် (သို့) အရာဝတ္ထု တစ်​ခု​ပေါ် (သို့) မိမိစိတ်​ထဲက ဝါသနာ ဆိုတဲ့ အ​ရာ​တွေ​ပေါ်ကို အရမ်း စွဲလမ်းတာမျိုး ၊ ရိုမန်းတစ်​ (romance ) ဖြစ်​တဲ့အရာမျိုးကို လိုချင်​တာ၊ ​ပေးစွမ်းချင်​တာ စသည်​ဖြင့်​ မျိုးစုံ​တွေးလို့ရပါတယ်​… ​သေချာ ​​ပြောပနိုင်​​လောက်​​အောင်​ထိကို မစွမ်းနိုင်​တဲ့ ဆန်းကြယ်​လှတဲ့ စိတ်​ခံစားမှု တစ်​မျိုးပါ….
Sex – လူသားနှစ်​​ယောက်​ထိ​တွေ့တယ်​၊ အာရုံခံစားမှု​တွေ့မှာ ​ပျော်​​မွေ့တယ်​လို့ အကြမ်းဖျင်း ဆိုနိုင်​ပါတယ်​… ​​အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး (သို့) အမျိုးသားနှစ်​ဦး (သို့)အမျိုးသမီးနှစ်​ဦး (သို့) တစ်​ကိုယ်​ရည်​ အာသာ​ဖြေခြင်းဖြင့်​​တောင်​ sex ကို ခံစားနိုင်​ကြပါတယ်​…
ဒါပြင်​ making love နဲ့ making sex ဆိုပြီး ကွဲပြားမှုရှိပါ​သေးတယ်​…
မရင်းနှီးသူ မသိသူနှစ်​​ယောက်​ဟာ… ကာမဆန္ဒ တစ်​ခုထဲ​ကြောင့်​ sex ကိစ္စ ပြုလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ … ဒါကိုmaking sex (ချစ်​ခြင်းမပါတဲ့ ကာမအရာ​မြောက်​ခြင်း) လို့ ဆိုကြပါတယ်​…
“making love ” ဟာ ချစ်​သူ လင်​မယားတို့ တစ်​​ယောက်​ဆန္ဒက်ု တစ်​​ယောက်​ သိတယ်​၊ သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​​တင်​မက သူရဲ့ နှလုံးသား၊ စိတ်​ခံစားမှုကို ပါ လိုက်​​လျောညီ​ထွေရှိပြီး sex ကိစ္စပြီးေ​မြာက်​တယ်​လို့ ဆိုနိုင်​ပါတယ်​…အချစ်​ပါတဲ့ ကာမ အရာ​မြောက်​ခြင်း​ပေါ့….
​ပြောခဲ့တာ​တွေဟာ လူသားတိုင်း ​ယေဘုယျ ကြုံ​တွေ့​နေရတဲ့ အချစ်​နဲ့ ကာမ(လိင်​စိတ်​ဆန္ဒ​) ကြားထဲ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ သ​ဘောတရား​တွေပါ…
အိမ်​​ထောင်​မှု တစ်​ခုတည်​​ဆောက်​တဲ့ အခါမှာ​တော့ love ဟာ အ​ရေးကြီးသလို sex ဟာလဲ တစ်​​ထောင့်​တစ်​​နေရာက အ​ရေးပါလှပါတယ်​… သာယာတဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေးဖြစ်​ဖို့ရာ အစွန်းနှစ်​ဖက်​ကို ဆွဲကိုင်​မထားပဲ လိုက်​​လျောညီ​ထွေ ​နေထိုင်​ဖို့လိုအပ်​ပါတယ်​… မိမိအိမ်​​ထောင်​ဖက်​ရဲ့ စိတ်​ခံစားမှု ၊ ဆန္ဒ ၊ လိုအပ်​ချက်​​တွေကို ဖြည့်​ဆည်း​ပေးနိုင်​ဖို့ရာ တစ်​​ယောက်​နှင့်​ တစ်​​ယောက်​ အမှန်​တကယ်​ ရင်းနှီးပွင့်​လင်း​နေထိုင်​ဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​…
ဒါ​ကြောင့်​ love နဲ့. sex ကြား ဗျာမများပဲ သာယာလှပတဲ့ အိမ်​​ထောင်​မှုကို တည်​​ဆောက်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​..
Dangers of excessive sex